५१ वर्षपछि महाशिवरात्रिमा बन्दैछ बिशेष संयोग, यी २ राशिलाई हुनेछ अत्यन्तै लाभ ! –
Home / रोचक / ५१ वर्षपछि महाशिवरात्रिमा बन्दैछ बिशेष संयोग, यी २ राशिलाई हुनेछ अत्यन्तै लाभ ! –
५१ वर्षपछि महाशिवरात्रिमा बन्दैछ बिशेष संयोग, यी २ राशिलाई हुनेछ अत्यन्तै लाभ ! – 0
महाशिवरात्री पर्व भगवान शिवको आराधनाको लागि विशेष महत्त्व रहेने गर्दछ । शिव भक्त यस समयको लागि वर्षभरी नै प्रतिक्षा गर्ने गर्दछन् । यस दिन भोलेनाथलाई प्रसन्न राख्नको लागि भक्त व्रत र आराधना गर्ने गर्दछन् ताकि उनीहरुको मनोकामना पुरा होस । मान्यता अनुसार यस दिन भगवान शिवको माता पावैतीसँग विवाह भएको दिन मानिन्छ । ५१ वर्ष पछि यो पटक विशेष संयोग बन्न लागेको छ ।
फागुन १ गते अर्थात् १३ फेब्रुअरी दिन मंगलबार हो र यस्तो संयोग ५१ वर्षपछि शिवरात्रीको पवै मंगलबारको दिनमा पर्न गएको छ । मंगलबारको दिन महाशिवरात्री पर्व हुनु निकै नै शुभ हुने गर्दछ किनकि मंगलबारको दिन हनुमान जीको दिन हुने गर्दछ । भगवान शिव र हनुमानजीलाई एकैरुप मानिन्छ । ज्योतिषको अनुसार यस्तो संयोगबाट २ राशीलाई सबै भन्दा फाईता हुने भएको छ ।
मेष: यस संयोगको शुभ असर मेष राशीलाई सबैभन्दा धेरै हुनेछ । मेष राशी भएकाहरुलाई कयौ शानदार अवसर प्राप्त हुनेछ , जसबाट उनीहरुको प्रतिष्ठा बढ्ने, धनको समस्याको समाधान हुने र सोचेको काम सबै सजिलैसँग पुरा हुनेछ ।
मीन राशीः यो राशी भएकाहरुलाई व्यापार र जागीरमा सफलता प्राप्त हुनेछ । हरेक क्षेत्रबाट सकारात्मक फर प्राप्त हुनेछ । बेरोजगारहरुको लागी नयाँ रोजगारीको अवसर प्राप्त हुनेछ । कानूनी विवादलाई निष्कर्षमा लैजना सकिनेछ । आम्दानी बढ्नेछ र पुराना सबै समस्याबाट छुटकारा मिल्नेछ ।
कसरी भयो हिन्दु धर्मको उत्पत्ति ?